स्मरण गुमाउने समस्या : कसरी बल्झिन्छ, कसरी उपचार गर्ने ? « Nepal Break
स्मरण गुमाउने समस्या : कसरी बल्झिन्छ, कसरी उपचार गर्ने ?
स्मरणशक्ति कमजोर (एम्नेसिया) हुने समस्या आम मानिसमा देखिने समस्या होइन । तर जसलाई यसले आक्रमण गर्छ त्यस्ता मान्छेको लागि यो जटिल समस्या हो ।
एम्नेसिया त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला उसले आफ्नो महत्वपूर्ण जानकारी समेत याद गर्न सकिँदैन । थोरै भुलक्कड हुनु र एम्नेसिया हुनु फरक विषय हो । एम्नेसियाको जानकारीका लागि आफ्नो विगतको ठूला घटनालाई समेत स्मरण हुन्छ या हुँदैन भन्नेबाट परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
यसमा जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा, यादगर घटनाहरु, जीवनमा हुने प्रमुख व्यक्तिसँगको भेट र अन्य महत्वपूर्ण विषय समेत सामेल हुन सक्छ । आफ्नो पहिचानलाई भुल्नु, फिल्म र टेलिभिजनमा एक आम समस्याको रुपमा देखाउने गरिन्छ । तर यो व्यावहारिक जीवनमा यो आमसमस्या होइन । यो समस्या वास्तविक जीवनमा हुन सम्भव हुँदैन । यसको कारण भनेको भुल्ने समस्याबाट ग्रस्त मान्छे आम रूपमा स्वयंलाई मात्र याद गर्छ भने उसलाई कुनै नयाँ जानकारी सिक्ने वा नयाँ याद नहुने समस्या बढी हुन्छ ।
एम्नेसियाले मस्तिष्कको त्यो क्षेत्रमा नोक्सानी पु¥याउँछ जो स्मरणको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । भुल्ने सम्बन्धी बिरामी स्थायी किसिमको पनि हुन सक्छ । एम्नेसियाको कुनै विशेष उपचार हुँदैन । तर स्मरण शक्ति बढाउने एवं मनोवैज्ञानिक तरिकाले भुल्नेसम्बन्धी बिरामीबाट पीडित मान्छे र उनको परिवाहरुको उपचार गर्न सकिन्छ ।
विस्मरणसम्बन्धी समस्याको प्रकार
विस्मरण सम्बन्धी समस्या धेरै प्रकारको हुने गर्छ जुन निम्नानुसार छन् ।
विस्मरणको समस्याको रेट्रोग्रेड प्रकारमा मान्छेले अहिलेको र पहिलेको स्मरण पनि बिर्सने गर्छ । यस प्रकारको समस्यामा मान्छेले धेरै पुराना र केही समयको घटनालाई समेत आफ्नो स्मरणमा राख्न सक्दैन । पुराना यादहरु जस्तो बालापनको याद, किशोरावस्थाका यादहरु कुनै पनि स्मरणमा आउँदैन । आम रूपमा भन्दा समग्र स्मरण शक्तिलाई नै यसले सुस्त गतिमा प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । डिमेन्सिया जस्तो रोगलाई भुल्ने बिरामी रेट्रोग्रेड प्रकारको कारण बन्ने गर्छ ।
जब तपाईं भुल्ने सम्बन्धी बिरामीको एन्टेरोग्रेड प्रकारबाट पीडित हुनुहुन्छ भने अब कुनै पनि घटनालाई तपाईंले आफ्नो दिमागमा समेट्न सक्नुहुन्न । यो प्रभाव अस्थायी हुन सक्छ । उदाहरणको लागि धेरै मदिरा पिउँदा हुने विस्मरण जस्तै अवस्था यो प्रकारको समस्यामा सिर्जना हुन्छ ।
अस्थायी वैश्विक प्रकार
यदि तपाईं विस्मरण सम्बन्धी यस प्रकारको समस्याबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने तपाईं भ्रम या व्याकुलता अनुभव गर्नुहुन्छ । जुन केही घण्टाको समयमा आउने गर्छ । तपाईंलाई यस अनुभवभन्दा पहिले केही घण्टामा स्मरणको नोक्सानी अनुभव हुन्छ वा सम्भवतः तपाईंलाई यस अनुभवको कुनै याद हुँदैन ।
शिशु अवस्थामा विस्मरणको समस्या
प्रायःजसो मान्छेलाई आफ्नो जीवनको पहिलो तीनदेखि पाँच वर्षसम्मका कुनै पनि घटनाहरु याद रहँदैन । यस सामान्य घटनालाई शिशुहरुमा भुल्ने सम्बन्धी बिरामी भन्ने गरिन्छ ।
विस्मरण सम्बन्धी समस्याको लक्षण
विस्मरणसम्बन्धी सामान्य लक्षण निम्नानुसार हुन्छ ।
१. एन्टेरोग्रेड विस्मरणको समस्यामा नयाँ जानकारी सिक्ने क्षमता बिग्रनु
२. रेट्रोग्रेड विस्मरण सम्बन्धी समस्यामा पछिल्लो घटनाहरु र पहिलेको परिचित जानकारीलाई याद राख्ने क्षमतामा कमी आउनु
३ अकल्पनीयतामा झूटो यादहरु बन्न सक्छ । या वास्तविक यादहरुमा गडबढी पनि हुन सक्छ ।
४. असम्बद्ध गतिविधिहरु र अकस्मात सुनिने झट्का लाग्ने खालका खबरले न्यूरोलोजिकल समस्याहरु सिर्जना गर्नेगर्छ । ५. भ्रम या भड्काव
विस्मरण सम्बन्धी समस्याको कारण
हाम्रो मस्तिष्कमा समस्या गराउने जुनसुकै कार्यले पनि हाम्रो स्मरणशक्तिमा समस्या गराउन सक्छ । मस्तिष्कमा पुग्ने चोट या क्षतिका कारण पनि बिरामीलाई न्यूरोलोजिकल समस्या सिर्जना हुने गर्छ । यसको निम्नलिखित कारणहरु हुन सक्छ ।
२. मस्तिष्कमा समस्या सिर्जना गर्ने भाइरसको संक्रमण
३. मस्तिष्कमा हुने अपर्याप्त अक्सिजन
४. दीर्घकालीन अल्कोहलको उपयोगबाट हुनेवाला भिटामिन १ को कमी ।
५. मस्तिष्कको उक्त क्षेत्रमा ट्युमर हुनु, जुन स्मरण शक्तिको नियन्त्रित गर्नमा मद्दत गर्ने खालको हुन्छ ।
६. मस्तिष्क रोग, जस्तो अल्जाइमर रोग वा अन्य प्रकारको मनोभ्रंश आदि ।
विस्मरण सम्बन्धी समस्याबाट बच्ने उपाय
दिमागको चोट भुल्ने सम्बन्धी बिरामीको मुख्य कारण हो । त्यसैले दिमागमा पर्ने असर कम गर्नु नै यसबाट बच्ने मुख्य उपाय हो । यसबाट बच्नको लागि निम्नलिखित उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
१. अत्यधिक मदिराको उपभोग नगर्नुहोस् ।
२. दुईपांग्रे सवारी चलाउने समयमा हेलमेट लगाउनु र चारपांग्रे सवारी चलाउने समयमा सिटबेल्ट बाँध्नु पनि बचावटको उपाय हो ।
३. टाउकोमा कुनैपनि संक्रमण भयो भने त्यसको तत्कालै उपचार खोज्नु ।
४. यदि तपाईंलाई स्ट्रोक वा अन्य गम्भीर टाउको दुखाइको समस्या छ भने यसको तुरुन्त उपचार खोज्नुपर्छ ।